မှတ်မှတ်ရရ ၉ ရက် ၉ လ မ၉၉ နဲ့ တခဏ
My blog, My style
Innovative, ideologist, entertainment, lifestyle,,,
ကျွန်တော် ဘလောက်စ ရေးခင်ကတည်းက ဒီနာမည်ကိုကြားဖူးနေပြီ၊ အရေအတွက် နဲနဲဘဲရှိနေသေးတဲ့ မြန်မာ ဘလောက် တွေထဲက ကိုမောင်လှ၊ ကိုညီလင်းဆက်နဲ့ မနိုင်းနိုင်း ဘလောက်တွေကို ဖတ်နေတာ၊ မရေးခင်ကတည်း ကဆိုပိုမှန်လိမ့်မယ်။ အကောင့်အလေးယူပြီး တော်တော်နဲ့ ကျွန်တော် ဘလောက်ကို သေသေ ချာချာ မရေးဖြစ်သေးဘူးလေ။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ပုံမှန်ဖတ်နေတဲ့ ဘလောက်လဲ ဖြစ်၊ ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး ဘလောက်လဲ ဖြစ်တဲ့ မနိုင်းနိုင်းရဲ့ ဘလောက်မှာ ကျွန်တော် နှစ်သက်တဲ့ စာတိုပေစလေး တွေ သု တရသ စာတမ်းလေးတွေ အမြဲရှိနေတတ်တယ်။ အချိန်များများ မပေးနိုင်လို့ စာအုပ်တွေကို သီးသန့် သိပ်ပြီး မဖတ် ဖြစ်တော့ပေမယ့် အခုလို စာတွေရှိနေတတ်တဲ့ ဘလောက်တွေကို ကျွန်တော် အမြဲ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလောက်အသေအချာ အသက်ဝင်အောင်ရေး တတ်လာတဲ့အခါမှာလဲ ပထမဆုံး ကွန်မန့်ပေးတဲ့ ဘလေက်ဂါလဲဖြစ်တယ်လေ။ သေသေချာချာ ရေးဖြစ်ခဲ့တာ ဘာညာ့ရဲ့ ကျေးဇူးကလဲမကင်းပါဘူး၊ သူတိုက် တွန်း လို့သေသေချာချာရေးဖြစ်သလိုသူရေးတာတွေလဲ သဘောကျခဲ့တယ်။ ဘာညာကလဲအဲဒီအချိန်မှာ အတော် လေးနာမည်ရနေပြီ၊ ရုံးကကိုရဲကလဲ အားပေးတယ်၊ ကျွန်တော်ကလဲ ၀ါသနာပါတာမို့ ကျွန်တော့် ဘလောက် ကလေးရေးဖြစ်ခဲ့တာ၊ အသစ်ကိုပြောင်းရေးလိုက်တာ ပထမဘလောက်က အခုဟာမဟုတ်ဘူး၊ ဘလာဂေါက်ကို ဘလောက်ရာသွင်းတဲ့ လူဟောင်းထဲမှာဆို မနိုင်းဘဲ၊ ဘယ်သူတွေ ရှိရှိမရှိရှိ ကျွန်တော့် ပို့ တွေမှာ မနိုင်းရဲ့ ကွန့်မန့်တွေရှိနေတတ်တယ်။ ဒါကိုက မနိုင်းနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ပိုပြီး ခင်ခင်မင်မင်ဖြစ် သွားခဲ့ တဲ့ အကြောင်းလေးတခု၊ ကျွန်တော့ အရေးအသားတွေကိုအားပေးတတ်တယ်လေ။
မနိုင်းရဲ့ အရေးအသားတွေအပြင် ဂျီတော့မှာ မိုးချုပ်ရင် တခါတလေပေါ်လာတတ်လို့ စကားတခွန်းနှစ်ခွန်းလဲ ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်မလေးရောက်နေတုန်းလဲ သူနဲ့များများပြောဖြစ်ခဲ့သလို မလေးကပို့တွေကို အားရ ပါးရ လာလာအားပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် တနေ့မှာမနိုင်းရဲ့ ပုံကိုရလိုက်တယ်။ တော်တော်များများက မနိုင်းရဲ့ ပုံရိပ်ကိုသေသေချာချာမမြင်ဘူးချိန်မှာဘဲ ကျွန်တော်တို့ ဘလောက်တိုင်း တတိယထုတ်မှာ မနိုင်းရဲ့ ပုံကို သုံးလိုက်တယ်။ ဘလောက်လောကမှာတော့ အဲဒီအချိန်တုန်းက မနိုင်းနိုင်းကို လူရော ဘလောက်ပါ တွဲပြီး တော် တော်သိသွားကြတယ်။ သူကိုယ်တိုင် မဖော်ပြလိုတဲ့ ပုံကိုသူ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ကျွန်တော်တို့ သုံးလိုက်တော့ မနိုင်း တော်တော် စိတ်ဆိုးမှာလို့ ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ မောင်ပွတ်နဲ့ ကျွန်တော်တော့မနိုင်းဒေါပွနေမှာ လို့ ထင်နေကြတာ၊ နောက်တော့သူက စိတ်မဆိုးပါဘူး၊ သူကိုယ်တိုင်နောက်ပိုင်း သူ့ဘလောက်မှာတောင် ပုံတွေ ဘာတွေတင်လာတယ်၊ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဂျာနယ်လေးကို သူ့ပုံသုံးရကောင်းလားလို့ ပြောဆို ပြီး ပွဲဆူအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကိုကမနိုင်းရဲ့ ချစ်စရာ ရိုးသားအေးဆေးမှုဘဲ၊ မနိုင်းရေးတဲ့စာတွေမှာ မှတ်သားစရာလေးတွေ ပါတိုင်းကျွန်တော် အမြဲမှတ်ထားလေ့ရှိခဲ့တယ်။
ခင်နေခဲ့တာကြာပါပြီ၊ နေတဲ့နေရာတွေက တနေရာစီ၊ အိပ်မက်တောင် မက်လို့မရတဲ့ နေရာတခုမှာ သူရှိနေတာ၊ တနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာအမှန်ပါဘဲ၊ ကိုခင်မင်လေးစားတဲ့ သူတယောက်က မမျှော်လင့်ထားတဲ့တနေ့မှာ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း တွေ့ဖို့ ကံပါလာတယ်လေ။ မနိုင်း ရန်ကုန် လာတော့မယ်လို့သတင်းရတယ်။ သူစလုံးကိုရောက်လာချိန်မှာ ကျွန်တော် စောစောသိလိုက်ရင် တွေ့ဖြစ်လိုက်မှာ ဘဲ၊ ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ရောက်တော့မှ မနိုင်းက စလုံးရောက်လာတယ်။ ကျွန်တော် မတွေ့ဖြစ် လိုက်တဲ့ ပထမ အကြိမ်ကြောင့် ဒုတိယ အခွင့်အရေးကိုစောင့်စားနေခဲ့တာ အခုတော့ ရောက်လာခဲ့တယ်။ ၉ လပိုင်းရဲ့ ၉ ရက်နေ့မှာ အဲဒီမတိုင်ခင်ကတည်းက ရောက်လာတဲ့ မနိုင်းကို အဲဒီနေ့မှ သွား တွေ့ဖြစ်တော့တယ်။ ချို့တဲ့နေတဲ့ ကိုယ့်အိပ်ကပ်ကြောင့် ဧည့်ဝတ်မကြေနိုင်ခဲ့သော်လည်း တိုက်ဆိုင်စွာ ကိုတက်စလာကြီးမွေးနေ့ဖြစ်နေတော့ အနေအထားလေးက တမျိုးလှသွားပါတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မနိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးစွာ နေခဲ့ရတယ်။ ငယ်ပေါင်းတွေပမာ ပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ကြတဲ့ ဒီနွေးထွေးတဲ့ တွေ့ဆုံမှုလေးက ကျွန်တော့် ဘ၀ရဲ့ မှတ်တိုင်တခုဖြစ်နေဦးမှာဘဲ။ အပြင်မှာမှ ပိုပြီး ပွင့်လင်းရိုးသားတဲ့မနိုင်းရဲ့ စိတ်ကို လေ့လာခွင့်ရလိုက်သလို အမြင်တွေဖလှယ်တဲ့စကားတွေ အများကြီးပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ မိုးချူပ်သွားသည့်တိုင် လန်း ဆန်းတက်ကြွနေတဲ့ အဲဒီနေ့က မြင်ကွင်းတွေကို ကျွန်တော် အမြဲအမှတ်ရနေဦးမယ်။ နောက်တခေါက်တော့ ပြန်ဆုံ ကြဦးမှာဘဲလို့ ဒီတခါတော့ ယုံကြည်ထားတယ် မနိုင်းရေ။
Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် said…
ဒီလိုပွဲမျိုး လွတ်သွားတယ်ဗျာ။ မနိုင်းနဲ့တွေ့ရင်း တက်စလာကြီးကို နှိပ်စက်ရမှာ။ ကျွန်တော့်အစား ပိုသောက် .. အဲ .. ပိုစားခဲ့တယ်ပေါ့လား။
တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးပါလို့....
မောင်ပွတ်ကတော့ နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့း)
September 21, 2008 at 6:31 PM
ဘလောကျရေးတာ ဝါသနာပါတယျ။ လှတျလပျစှာ တှေးတယျ၊ လှတျလပျစှာရေးတယျ။ ဘဝအကွောငျး ကိုယျ့ အတှအေ့ကွုံ မြှဝခေငျြတယျ။ I do blogging, think free and feel to write. I would like to share my life experience. That's it.
vision of my blog
အခုဖြစ်နေတာ ၁၀နာရီ ၃၁
Tက်ေLာ့ Hုန်း လာဘီစ်
At BarcampYangon 2013 Meeting6At BarcampYangon 2013 Meeting6At BarcampYangon 2013 Meeting61
digital device .electric car2
Galaxy Gear 21
Galaxy Gear fit1
HP mini 1101
ISOC Myanmar Chapter1
Miss Universe Myanmar1
Myanmar Blogger Society13
Myanmar fist time on Mount Everest1
Myanmar mobile app3
Smartphone Film Festival1
software & solutions7